Joe Carroll wuxuu ku biirayaa jilayaasha taxanaha "Shan Maalmood oo Xusuusta ah" | Waxaan ka imid mac
Joe Carroll wuxuu ku biirayaa jilayaasha taxanaha "Shan Maalmood oo Xusuusta ah"
Joe Carroll, oo hadda iska diiwaangeliyay inuu qayb ka noqdo tuuray miniseries -ka Shan maalmood Xuska, taxane ka sheekeynaya sheekadii 5 -tii maalmood ee ugu horreysay ka dib Duufaantii Katrina oo ku dhufatay New Orleans kuna wareegtay isbitaalka magaaladan iyo go’aammada ay tahay in kooxda caafimaadku sameyso.
Marka lagu daro Joe Carroll, kabka adeegyadan ayaa ka kooban Vera Farmiga, Cherry Jones, Adepero Oduye iyo kuwo kale. Carroll wuxuu ciyaari doonaa Michael Arvin, oo ah maamule ganacsi oo mas'uul ka ah hel khayraad lagu badbaadiyo nolosha dadka halis ugu jira boqolaal kiilomitir goobtaada.
Waxaa qoray Ridley iyo Cuse waxayna ku saleysan tahay buugga sheeko -la'aanta ah ee la ammaanay Qoraaga ku guuleystay abaalmarinta Pulitzer Sheri Fink, Shan Maalmood oo Xusuus -qorka taariikhda shanta maalmood ee ugu horreysa cusbitaalka New Orleans ka dib markii Hurricane Katrina ay dhulka ku soo dhacday.
Markii biyuhu kor u kaceen, korontadii ayaa baxday oo kulaylkii kordhay, daryeeleyaashii daalay ayaa lagu qasbay go'aan ka gaadho nolosha ama geerida taasi waxay ku haysay sanado.
Waqtigan xaadirka ah, jadwalka taariikhda marka soo -saarka taxanahan la qorsheeyey inuu bilaabmo, sidaa darteed kuma dhiiran karno inaan ku sheegno taariikhda sii deynta ee Apple TV. Waxay u badan tahay, bilaha soo socda, hadda oo kabka u muuqda inuu dhammaystiran yahay, istuudiyaha ayaa diyaarin doona wax -soo -saarka oo bilaabi doona duubista.
Joe Carroll wuxuu caan ku yahay bandhigiisa taxanaha FBI iyo filimka Romeo iyo Juliet. Intaa waxaa sii dheer, wuxuu ka qaybqaatay dhacdooyinka telefishanka ee Chicago Fire, NCIS: New Orleans, Xeerka iyo taxanaha El Ilusionista.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Joe Carroll wuxuu ku biirayaa jilayaasha taxanaha "Shan Maalmood oo Xusuusta ah"
Taxanaha Apple Watch 7 wuu ka sii weynaan doonaa marka loo eego xanta cusub